विदेश जाने युगको अन्त्य हुँदै, २० लाख युवालाई रोजगारी — Motivatenews.Com
काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडले रोजगारीका लागि विदेश जानपर्ने युगको अन्त्य भएको बताएका छन । उनले नेपालमै २० लाख युवालाई रोजगारी दिने योजना ल्याएको भन्दै कामका लागि विदेश जानपर्ने युगको अन्त्य भएको बताएका हुुन ।
कोरोना महामारी र यसले सृर्जना गरेको संकट, वेरोजगारीको समस्या, निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका अफ्ठ्यारा तथा यी यावत समस्याको समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै उनले युवाको पक्षमा सरकारले विभिन्न खालका योजनाहरु ल्याएको बताए । उक्त के हो ? र कसरी कार्यन्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेछौँ ।
तपाईं उद्यमी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । देशले तपाईंजस्तो अनुभवी मन्त्री पाएको छ । यही बेला कोरोना महामारी जस्तो महासंकट आइपुर्यो र मुलुकले लामो समयदेखि लकडाउनको सामना गरिहेको छ । अहिले देशैभरि रहेका उद्योग, व्यावसायिक क्षेत्रहरु धरासायी भएका छन् । यसलाई उठाउन अब के गर्नुपर्छ ?
तपाईंले म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री हुनासाथ कोरोना आयो र लकडाउन भयो भन्ने आसयको प्रश्न गर्नुभयो, यो मेरो दोष त होइन (हा हा हा) । यो एउटा संकट र चुनौती पनि हो । तर यसबाट डराएर हुँदैन । यसप्रकारका महामारी वा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाविपत्तीहरु त आइरहन्छन् । मान्छेको जिन्दगी नै स्ट्रग्लिङ हुनुपर्छ । स्मुथ हुनुहुँदैन । यस्तो हुनु पनि पर्छ । समस्या आउँछन् र सँगसँगै समाधान पनि निििस्कन्छन् । यो एउटा ठूलो समस्या देश र जनताको लागि मात्रै नभएर विश्वकै लागि हो ।
यसको पनि समाधान हुन्छ । मुलुकले लकडाउनको सामना गरेको करिब ३ महिना भइसकेको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरस कोभिड १९ पनि निक्कै कन्ट्रोल भइसकेको छ । तर एकातिर संक्रमितहरु बढेको बढ्यै छन् । हाम्रो टेस्टिङ बढेसँगै संक्रमित बढेको देखिएको हो । तर यी नयाँ संक्रमित हुन् भन्न मिल्दैन । यो समस्या भारतबाट आउने र केही मात्रामा समुदायमा पनि देखिएको पक्कै हो । तर यो देशभित्र फस्र्ट स्टेजको मात्रै हो । यो समुदायस्तरमा भने अझै सरिसकेको छैन ।
यसबाट धेरै चिन्तत हुनुपर्ने, डराउनुपर्ने अवस्था छैन । अब सरकारले लकडाउनलाई विस्तारै लुज गर्दै गइरहेका अवस्था पनि छ । अब हाम्रो व्यापार, उद्योगधन्दाहरु पनि बिस्तारै सुचारु गर्दै लौजाने सरकारले नीति अख्तियार गरेको छ । यसबीचमा हामीसँग चुनौतीहरु पनि अनगिन्ती नै छन् । यो सानो कुरो होइन । तीन महिनादेखि हामी पूर्णरुपमा शिथिल भएर बसेका छौँ । बेरोजगारीको ठूलो समस्या देखिएको छ । रोजगारीका लागि विदेशिएका हाम्रा युवाहरु पनि फर्किएर आइरहेका छन् । अब लाखौँको संख्यामा युवाहरु फर्किन्छन् ।
२० औँ लाखको संख्यामा बेरोजगारीको सिर्जना हुन्छ, यसमा शंका छैन । विश्वमा आर्थिक मन्दी छाइसकेको छ र त्यो हामीकहाँ पनि हुन्छ । अब यो आर्थिक मन्दीलाई कसरी पार लगाउने, कसरी समस्या समाधान गर्ने, कसरी रोजगारीको सिर्जना गर्ने ? यी यावत् विषयहरु गम्भीररुपमा हाम्रा सामू उभिएका छन् । यसमा हामी योजना बनाएर अघि बढ्छौँ ।
उदाहरणको रुपमा हामीभन्दा भौगोलिक क्षेत्रफल र जनसंख्या आदि हिसाबले पनि धेरै सानो मुलुक हो ताइवान । तर यसको उत्पादन विश्वमा देखिन्छ । किनभने उनीहरुले गुणस्तरीय सामान बनाउँछन् । सरकारले उद्योमीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अब हामी पनि गर्छौं । हामी ताइवानभन्दा कम छैनौँ । हामी पनि गुणस्तरीय सामान उत्पादन गरेर नेपाली ब्राण्डलाई लोकप्रीय बनाउन सक्छौँ । यतातिर हामीले सोच बनाउनुपर्छ । अब हामीले मानसिकता बदल्ने बेला आइसकेको छ । अब गरिब मानसिकता तथा पुरानो मानसिकताले हुँदैन । अब आधुनिक मानसिकताले काम गर्नुपर्छ । हाम्रो इच्छाशक्ति, आत्मविश्वास बढाउने बेला आइसक्यो । यदि यी कुराहरु हामीले आत्मसाथ गर्यौँ भने पक्क पनि हामी हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ । त्यसो हुँदा विकसित देशहरुको श्रेणीमा आउन हामीलाई समय लाग्दैन । हामीसँग भएका जति पनि सम्भावना छन् तिनलाई इमान्दारितापूर्वक उपयोगमा ल्यायौँ भने काम गर्न समय लाग्ने छैेन ।
— म त त्यसो भन्न पनि रुचाउँदिन । किनकि हरेक समस्या समाधानका लागि हहुन्छ । आवश्यक आविष्कारको जननी हो । कोरोना कहरले हामीमाझ एउटा नयाँ अवसर सिर्जना गर्दैछ । हामीमाझ नयाँ विचार पैदा हुँदैछ । यो सिल्भर लाइन हो । यो हाम्रो लागि ठूलो अवसर पनि हो । कोरोना आएर हामीलाई धेरै कुरा सिकाएर जाँदैछ । हामी हाम्रा युवालाई फेरि भित्र्याउँदैछौँ । म उनीहरु सबैलाई स्वदेशमा स्वागत गर्न चाहान्छु । अब उनीहरुलाई हामी काम दिन्छौँ । नेपालमा कामको कमी छैन । मेरो कुरालाई एउटा भाषण वा डायलगको रुपमा नलिनोस् ।
मैले त उद्योग, व्यवसायका क्षेत्रमा धेरै अध्ययन गरेको छु । मैले राज्यमन्त्रीको भूमिका निभाएको पनि ६/७ महिना भइसक्यो । हामीकहाँ अथाह काम छ तर काम गर्ने मान्छे छैनन् हामीसँग । मैले अघि भनेँ, हाम्रो देशमा कुनै वस्तु बन्दैन । तालाचाबी नै बन्दैन । हामी काम गर्दैनौँ अनि गरीब भयौँ मात्रै भन्छौँ । हामी किन उत्पादन गर्न सक्दैनौँ ? उत्पादन गरौँ के । म तपाईंको मिडियामार्फत् म सम्पूर्ण देशवासीलाई खास गरेर युवाशक्तिलाई तपाईंहरु आउनुहोस्, नयाँ नयाँ चिज बनाउनुहोस्, तपाईंलाई सम्पूर्ण सहयोग सरकारले गर्छ भनेर आव्हान समेत गर्दछु । त्यसका लागि तपाईं हाम्रो मन्त्रालयमा आउनुहोस्, मसँग भेट्नुहोस्, हामी तपाईंलाई पूर्ण सहयोग गर्छौं । तपाईं नयाँ उत्पादन लन्च गर्नुहोस् । तपाईंलाई एक्सपोर्ट गर्ने, मार्केट बनाउन सहयोग गर्नेदेखि लिएर तपाईंको उद्योगलाई घाटामा जान नदिने सम्मका सहयोग हामी गर्दछौँ ।
— यस विषयमा हाी बडो गम्भीर ढंगले लागेका सोचिरहेका छौँ । हामीले २० देखि ३० लाख अतिरिक्त रोजगारी सिर्जनाका खातिर योजनाहरु बनाइरहेका छौँ । त्यसका लागि केही बस्तुहरुमा अब हामी आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । हाम्रो भूमि मलिलो छ । हामी पहिले कृषिमा आत्मनिर्भर नबनी हुँदै हुँदैन । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि कृषिप्रधान देश हुँदाहुँदै हामी ६० प्रतिशत अनाज, तरकारीहरु विदेशबाटै निर्यात गरिरहेका छौँ । हामीसँग राम्रो डेरी पनि छैन भनिन्छ । आखिर किन ? यसको कारण के हो ? हामी दूधमा मात्र पनि किन आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ ?
हाम्रो सोच गलत छ वा सहयोगको कमी वा आधुनिक प्रविधितर्फ जान सकेनौँ अथवा पुरानो शैलीमै काम गरिरहेका छौँ भन्ने यावत विषयमा अब हामीले धेरै पटक सोचेर काम गर्ने बेला आयो । अर्को कुरो म तपाईंलाई के पनि भन्न चाहान्छु भने हामी किन नयाँ नयाँ उद्योगहरु ल्याउन सक्दैनौँ ? फेरि पनि जोड दिएर भन्छु, हामी नयाँ नयाँ उद्योग ल्याउन सक्छौँ । यहाँको मुद्रा बाहिर जान्छ, बाहिरबाट सामान आउँछ, फेरि युवाहरु पनि बेरोजगार छन् भन्छौँ । हामी हाम्रा युवाहरुलाई स्वदेशमै अवसर नदिइ विदेश पठाउँछौँ, अनि बेरोजगार छन् भन्छौँ । युवाहरुलाई आवश्यक मात्रामा अवसर दिन नसक्दा यो सबै भइरहेको हो ।
सरकारले सेना, प्रहरी, सरकारी कार्यालयहरुले स्वदेशी वस्तु उपभोग गर्छन्, बाहिरको वस्तु प्रयोग गर्ने छैननन् भनेर नीति बनाउनुपर्छ ।
— तपाईंले रुग्ण उद्योगको कुरा गर्नुभयो, रुग्ण उद्योगहरु सुचारु गर्न सक्यौँ भने हामी लाखौँ जनालाई रोजगारी दिन सक्छौँ । आधुनिकतातिर गर्यौ भने कृषिमा ५ देखि १० लाखलाई अतिरिक्त रोजगारी दिन सक्छौँ । यसको लागि रुग्ण उद्योग चलाउने सरकारले एउटा मोडेल बनाउँदै छ । यसलाई लिजमा वा भाडामा दिने पनि होइन, सरकारले आफैँ पनि चलाउन सक्दैन । त्यो सोचको साथमा त्यसैले निजी क्षेत्रसँग पीपीपी मोडेलमा गएर सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ । त्यो मोडेलमा गएर प्रोफिट सेयरिङका आधारमा काम गर्न सकिन्छ ।
यसो गर्दा ती उद्योगहरु चल्छन् र नाफामा जान्छन् भन्ने हाम्रो सोच छ । निजी क्षेत्रले आफ्ना उद्योगलाई घाटामा जान दिँदैन । सरकारका धेरै उद्योगहरु छन्, तर तिनको हालत कमजोर छ । हुन त निजी क्षेत्रमा पनि अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था कमजोर नै छ । यी यावत् विषयमा हामी मनग्गे अध्ययन, अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । म आफैँ पनि उद्यमी व्यवसायका क्षेत्रका मान्छे हुँ । त्यसर्थ तपाईं निशिन्त हुनुहोस्, अब विगतको अवस्था दोहोरिँदैन । पक्कै पनि अब नयाँ विहानीको शुरुवात हुने छ । मुलुकले उत्पादनशीलतालाई जोडबलका साथ अगाडि बढाउने छ ।
— यो कुनै भ्रम पनि होइन, न त यो हौवा नै । समयमै लकडाउन गर्नु आवश्यकता थियो । यथार्थमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ एक महामारी नै हो । पहिले पहिले एपेडेमिक वा एन्डेमिक एउटा सीमित क्षेत्रमा मात्रै हुन्थ्यो । स्मलपक्स, चिकेनपक्स, हंैजा, ट्युबरक्लोसिस्, सार्सजस्ता अरु पनि धेरै एपेडेमिक रोगहरु हामीले देखेका छौँ, जानेका छौँ । कोरोना भाइरस जस्तो महामारीका बारेमा अब दुनियाँमा कोही पनि बेखबर छैन । यो एउटा गम्भीर विषय हो । यसले जब चाइनाबाट युरोप, अमेरिकाजस्ता देशहरुमा भयाबह रुप लिँदै गयो र भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा पनि यो देखिन थालेपछि हामीले समयमै लकडाउन गर्नु पर्दथ्यो र सरकारले त्यही गर्यो ।
समयमै लकडाउन गरेकोले अहिले पनि हामीले यसलाई धेरै भन्दा धेरैमा संक्रमण हुनबाट बचाएका छौँ । यसमा हामी समयमै सचेत हुन जरुरी थियो हामी सचेत भयौं । जनता पनि सचेत भए र आफ्नो बचाउ गर्ने, सुरुक्षाका लागि सावधानी अपनाउने सक्ने भए । हामीले पनि यसबीचमा धेरै कुराहरु सिक्यौँ । हामीले हाम्रो जीवनशैली, फुड ह्याबिट, शिक्षा, परम्परा र संस्कृति, चाडवाड मनाउने तरिका आदिमा परिवर्तन गर्यौँ । हामीले हात मिलाउने, अंकमाल गर्ने संस्कारलाई छोडेर हाम्रै नमस्कार गर्ने परम्परालाई अंगाल्यौँ । साबुनपानीले हात धुने बानीको विकास भयो । खाने प्रणालीमा पनि हाम्रो आफ्नै विशेषतालाई अंगाल्यौँ । किनकि हाम्रो खाने प्रणाली प्राकृतिक छ । हामी मनग्गे मरमसला, जडिबुटी खान्छौँ । हाम्रो खानामा शुद्धता छ । जसले गर्दा हामीलाई धेरै फाइदा पुगिरहेको हुन्छ ।
वास्तवमा लकडाउन भएपछि वातावरण पनि स्वच्छ भएको छ । विगतमा काठमाडौँबाट हिमाल प्रत्यक्ष देखिदैन थियो, अहिले देखिन थालेको छ । हस्पिटलहरुमा पनि अन्य विरामीहरु घटेका छन् । घरमा बसेर शुद्ध खाना खाने, परिवारसँग बस्ने, शान्त बस्ने कारणले विरामी हुने क्रम पनि घटेको हुन सक्छ । यसले गर्दा डाक्टरहरु बेरोजगार हुने अवस्था आएको छ ।
त्यसर्थ यो सबै कोरोना भाइरस र लकडाउनकै कारण भएको हो । नेपालमा कोरोना भाइरस देखिनुभन्दा अघि हामीकहाँ सेनिटाइजर, पीपीइ, भेन्टिलेटर, मास्क, टेस्टिङ किट पनि बन्दैन थियो तर यो संकटले हामीलाई यस्ता आवश्यक वस्तु बनाउन सिकायो ।
— त्यस्तो हुँदैन र होइन पनि । हो, अहिले सरकारसँग रेभिन्यू छैन । सरकारले विभिन्न शीर्षकहरुमा खर्चहरु गर्नुपर्छ । रेभिन्यूको लागि कर उठाउने प्रयास त गर्नैपर्छ । तर यतिखेर निजी क्षेत्रसँग पनि पैसा छैन । तीन महिनादेखि शिथिल भएर घरमा बसेर कर्मचारीहरुलाई तबल खुवाउने पैसा छैन । अहिले त उद्यमी तथा व्यवसायीहरुसँग विजुलीको विल तिर्ने पैसा छेन । बैंकको ऋणले ढाड सेकेको अवस्था छ । यी यावत समस्याहरुलाई सरकारले पनि बुझेकै छ ।
— उद्योगी व्यवसायीहरुलाई धेरै तिरबाट कस्नु आवश्यक छैन र हुँदैन पनि । उद्योगी व्यवसायीले नै देशलाई समृद्ध बनाउने हुन् । निजी क्षेत्रले ठूलो खतरा मोलेर, आफूसँग भएभरको पूँजी लगाएर, बैंकबाट ऋण लिएर, उद्योग र व्यवसायको सिर्जना गरिरहेका हुन्छन् । यसो गरिरहँदा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु असफल भएर पनि यो क्षेत्र छोडिरहेका हुन्छन् । उद्योगी, व्यवसायीलाई स्मुथ तरिकाले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
सही वा गलत के भएको छ भन्ने विषयमा नियमन गर्नुपर्छ, गलत पाएमा कारबाही वा दण्डित गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन । नियन्त्रणका लागि हामीसँग धेरै निकायहरु छन् र तिनले आफ्नो ठाउँबाट काम पनि गरिहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुमाझ धेरै भय र त्रास फैलाउनु पर्ने अवस्था मैले त देखेको छैन । यदि त्यस्ता प्रस्तावहरु आएका छन् भने संशोधन पनि होला । यो अवस्था सधैंभरि रहिरहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । यस क्षेत्रमा एउटा राम्रो कुरा के छ भने जति पनि उनीहरुले मुनाफा कमाउँछन्, त्यसको केही प्रतिशत समाज सेवामा लगाउँछन् ।
नागरिक, समाज, देशको सेवामा उनीहरुको ठूलो योगदान हुन्छ । उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई जहिले पनि शंकाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । यो मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै कुरा सिकेँ, धेरै अनुभव लिएँ । उनीहरुलाई खुलेर काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । उद्योग खोल्नुस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, तपाईंहरुले काम गर्नुभयो भने मात्रै देश समृद्ध हुन्छ । तपाईंहरुलाई भएका समस्याहरु हामी सामू आएर भन्नुहोस् । हामीले राष्ट्रियतालाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्नुपर्छ । हामीले कहिले पनि देश र देशबासीसँग गद्दारी र राष्ट्रघात गर्नु हुँदैन । त्यसबाहेक हामीले जे गरे पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै आर्थिक उदारीकरणका निहुँमा सरकारले निजीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो । तर समय वित्दै जाँदा त्यसको मारमा निजी क्षेत्र नै बढी प्रतिडित भइरहेको छ, जुन कुरा अहिलेको लकडाउनमा पनि प्रष्ट हुन्छ । एकातिर निजीकरण भन्ने अर्कोतिर उद्योगी व्यवसायीहरुको घाँटी निमोठ्ने सरकारी रबैया ठीक भएन नि, होइन र ?
— देश चलाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ । र सरकारले राजश्व उठाउनको लागि कर पनि लिनै पर्छ । हाम्रो देशमा करको स्लेप धेरै ठूलो छैन । उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा २० प्रतिशत र व्यवसायीमा २५ प्रतिशत भनेको हाइयेष्ट हो । त्यो धेरै ठूलो पनि होइन । भ्याट १३ प्रतिशत छ । त्यो बाहेक नकारात्मक सूचिमा पर्ने केही वस्तुहरुमा एक्सरसाइज छ । खासै ठूलो ट्याक्स स्टक्चर हाम्रो देशमा छैन । सरकारले राजश्व पनि त उठाउनै पर्ने हुन्छ । तर निचोर्ने कुरा जुन छ, त्यस्तो नेपाल सरकारको कानून र व्यवहारमा छैन । निजीकरणको व्याख्या गर्दा सरकारले आफ्ना केही उद्योग र संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने भन्ने रहेछ । प्रायः ती उद्योगहरु चल्न सकेनन् । यो अनफर्चुनेट हो ।
बजारको दूरगामी प्रभाव परेकोले होला । ओभरल हेर्दा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट छन् । म बारम्बार भन्छु, निजी क्षेत्रलाई सन्तुष्ट बनाउनै पर्दछ । निजी क्षेत्रलाई खुलेर काम गर्न दिनुपर्छ । यसलाई डर, त्रासको ठूलो परिधिभित्र राख्नु हुँदैन । गलत काम गर्नेको लागि त ऐन, कानून, नियम धेरै छन् । उपभोक्ता ऐन लगायतका धेरै ऐन, नियम छन् । ट्याक्स छली गर्ने, श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने, कालोबजारी गर्नेलाई त कारबाही हुन्छ नै । नियम र ऐनको खिलाफमा काम ग¥यो भने उसलाई उम्किने आधार छैन । तर सबैलाई चोर हो, कालाबजारी हो भनेर निजी क्षेत्रलाई ब्लेम गर्नु हुँदैन । निरुत्साहित गर्नु हुँदैन, प्रशंसा गर्नुपर्छ, हतोत्साहित गर्नु हुँदैन ।
— हामी धेरै निराशाबादी पनि हुनु हुँदैन र शंका, भ्रमको स्थितिमा पनि बस्नु हुँदैन । सानो तिनो विषयहरुमा यस्ता कुराहरु आइरहन्छन् । नक्साको विषय हाम्रो राष्ट्रियताको कुरा हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो, त्यसलाई नक्सामा समावेश ग¥यौँ । हाम्रो एक इन्च जग्गा पनि अरुलाई दिँदैनौ र अरुको पनि हामीलाई चाहिँदैन । यो जग्गा हाम्रै हो । सुगौली सन्धिको समयमा नै यो स्पष्ट भइसकेको छ । यो अन्तिम दस्तावेज हो । त्यो दस्तावेज अहिले हामीसँग पनि छ र भारतसँग पनि छ । त्यो दस्तावेजले स्पष्ट गरेको छ कि त्यो नेपालको जग्गा हो ।
ब्रिटिस शासन कालमा र यहाँका त्यतिबेलाका राणा राजा महाराजाको समयमा यो सन्धि भएको थियो । त्यो सन्धिलाई मान्नु छैन भने हाम्रो धेरै भूभाग भारतबाट आउँछ । पूर्वको टिष्टादेखि उत्तराखण्डको क्षेत्र, दार्जिलिङ, सिक्किम सबै हाम्रै हुनुपर्ने हो, यदि सुगौली सन्धि मान्दैनौँ भने । मान्छौँ भने यो त स्पष्ट नै छ । तर हाम्रो क्षेत्र अरुले अनावश्यक प्रयोग गर्यो भने त, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । हामीले नक्सा पनि बनाइसकेका छौँ । यसबीचमा संविधान पनि संशोधन भइसकेको छ । भारतसँगको सम्बन्धमा यसले कुनै असर पार्दैन । भारत पनि एउटा ठूलो देश हो, उसले यसलाई ठूलो छाती पारेर स्वीकार गर्छ । भारतीय नेताहरु छन् उनीहरुले पनि यो विवादित विषय त हो तर संवाद गरेर समाधान गर्छौ भन्ने सोच्नु पर्छ । हामी पनि वार्ताबाट समाधान गर्ने पक्षमै छौँ ।
तर नाकाबन्दी लगाइदिने, नेपाललाई दुःख दिने, बन्द गरिदिने त्यो इण्डिकेशन आएको पनि छैन र आउँदैन पनि । भारतजस्तो ठूलो र प्रजातान्त्रिक मुलुकले एउटा छिमेकी त्यसमा पनि विशेष सम्बन्ध भएको नेपाललाई हस्तक्षेप गर्छ, दुःख दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विगतमा केही अव्यवहारिक कदम भारतले उठाएको थियो तर पछि ऊ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भत्र्सना र आलोचनाको विषय बन्यो । भारत र नेपालबीच अभिन्न र मजबुद सम्बन्ध छ । रोटी, बेटीको सम्बन्ध छ, भारतीय नेताहरुले नेपाललाई धेरै माया गर्छन्, भारतीय जनताले पनि नेपाली जनतालाई माया गर्छन् र हामी पनि भारतलाई माया गछौँ । यस्तोमा सानोतिनो कुराले सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन । कुनै डर र त्रासमा बस्नु पर्ने अवस्था पनि छैन ।
— आफ्नो मुखले आफ्नो महिमा मण्डन गर्नु हुँदैन । त्यो तपाईंहरुले र जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो । यो मन्त्रालयको काम कस्तो रह्यो त्यो मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । अहिलेसम्मको फिडब्याकले यो मन्त्रालय अब्बल रह्यो । यसअघिका समस्या र अहिलेको अवस्थामा आपूर्तिको व्यवस्थामा फरक ल्याउन सकेका छौँ ।
कहीबाट पनि गुनासो सुन्नु परेको छैन । एउटा नेपाली पनि भोको बस्नु हुँदैन भन्ने सोचेर हामीले काम ग¥यौं । गाउँगाउँमा राहत वितरण ग¥र्यौँ, यो प्रयासमा हाम्रो कमी रहेन । हामी र हाम्रो टिमले पूरा जागरुक भएर यो समयमा काम गरेका छौँ । मन्त्रालयको टिमले पूर्ण साथ दिएको छ । लकडाउनको बेला पनि हामी एक दिन नबसी पूर्ण इमान्दारिताका साथ काम ग¥यौं ।
आगामी दिनमा पनि संकटका समयहरु आउन सक्छन् । अब रेभिन्यु पनि बढाउनु छ, रोजगारी पनि दिनु छ । आर्थिक क्रियाकलापलाई मुभमेन्टम दिनु पनि अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि हामी ठूलो सोचका साथ अघि बढ्दैछौँ । अहिले हामीले हाम्रो उत्पादनहरु निर्यात गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिएका छौँ । यो समयले हामीलाई ठूलो शिक्षा दिएको छ । अब नयाँ सोचका साथ काम गर्न पाइन्छ भनेर म खुशी पो छु । अब हामी युवा शक्तिलाई साथमा लिएर अघि बढ्छौँ । नेपाललाई विश्वको विकसित देशमा चिनाउने अवसर हामीले प्राप्त गर्नेछौँ गछौं ।
नेपालीहरु अदम्य साहसका धनी जाति हुन् । हाम्रो शीर उँचो छ । हामीसँग सगरमाथा छ र त्यतिकै ठूलो मन पनि हामीसँग छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्युले लिनुभएको ‘समृद्ध नेपाल शुखी नेपाली‘को महान सपना साकार बनाउन हामी दिलोज्यानले लागि पर्नेछौँ ।
२०७७ असार १८ गते प्रकाशित